The Ulefone Power 6 dia nanambara ny endriny tao amin'ny MWC 2019 [Video] | Androidsis
The Ulefone Power 6 dia nanambara ny endriny tao amin'ny MWC 2019 [Video]
Tapitra ny Kongresin'ny World Mobile 2019, any Barcelona, ​​Espana, ary fahombiazana lehibe izany. Ny kintan'ny seho dia teknolojia finday 5G ary ankoatry ny famoahana ny tsara indrindra amin'ny tsara indrindra amin'ny indostria, ny famelabelarana sy ny fanambarana natao tamin'ilay fampisehoana dia haminany ihany koa ny fironana manaraka.
Nandritra ny seho, ny famolavolana ny telefaona bateria lehibe manaraka, ny Herinaratra Ulefone 6, ary koa ireo mampiavaka azy manokana sy ny mombamomba azy. Andao hojerentsika izany amin'ny horonantsary etsy ambany.
Araka ny hitantsika, tsy toy ny teo alohany, ny Herinaratra Ulefone 5, ny finday avo lenta dia toa manify kokoa ary miaraka amin'ny fangejana mahazo aina kokoa. Raha ny mombamomba azy dia hampiditra a ny fitaovana afovoany a Bateria 6,350 mAh miaraka amina tohana famahanana haingana 5V / 3A. Ho fanampin'izany, ny efijery dia mirefy 6.3 santimetatra diagonaly ary manana fehezan-drano sy famahana FHD +, ahoana no mety hisy azy raha tsy izany. (Fantaro izy: Ulefone Armor 6, ny smartphone izay mahazaka azy rehetra)
Miroso amin'ny departemanta fakantsary, ny fanamboarana fakan-tsary any aoriana dia misy combo sensor 21 + 5 MP, raha ny mpitifitra selfie dia manana sensor 21 megapixel ihany. Ny telefaona dia ho tonga miaraka amin'ny SoC octa-core, izay mety ho Mediatek, miaraka amin'ny RAM 4GB sy habaka fitehirizana anatiny 64GB. Farany, manana fanohanana ny NFC sy OTG, ny fanondroana ny rantsan-tànana sy ny tarehy ary Android 9 Pie.
Farany, tsy misy fampahalalana marina momba ny vidiny na ny daty famoahana ny tsena, mba hahafahanao mijery akaiky ny tranonkalany ofisialy raha mila fanazavana fanampiny. Na izany aza, antenaina ny hampiasan'ny orinasa azy amin'ny fomba ofisialy miaraka amin'ny antsipiriany rehetra amin'ity volana ity, raha ny fahatongavany any amin'ny magazay sy tranokala antsinjarany kosa dia kasaina hatao amin'ity volana ity, fa bebe kokoa amin'ny farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » The Ulefone Power 6 dia nanambara ny endriny tao amin'ny MWC 2019 [Video]
Blackview BV9800, finday avo lenta finday vaovao atolotra ao amin'ny MWC 2019